Vaovao - Mitombo hatrany ny fangatahana ampahany amin'ny fandrefesana mari-pana
Mitombo hatrany ny fangatahana ampahany amin'ny fandrefesana mari-pana
Amin'izao fotoana izao, ny tranga areti-mifindra ao an-trano dia mitombina, saingy ny tranga areti-mandringana any ivelany dia mitombo, izay misy fiatraikany amin'ny rojom-pandraharahana manerantany, rojom-bidy ary rojom-pamatsy. Miaraka amin'ny fiparitahan'ny valanaretina eto amin'izao tontolo izao, toy ny akora ilaina amin'ny fisorohana ny valanaretina, toy ny sarontava sy fitafiana miaro, ny fangatahana fitaovam-pitsaboana sy fitaovana toy ny fitaovam-pandrefesana mari-pana dia nitombo haingana, ary nanjary vokatra malaza indrindra nandritra ny vanim-potoanan'ny valanaretina. Raha ny angon-drakitra teo aloha an'ny Ministeran'ny Indostria sy ny Teknoloolojian'ny fampahalalana, tao anatin'ny roa volana lasa, ny vokatra thermomera infrared dia nihoatra ny an'ny taona iray tamin'ny taon-dasa. Miaraka amin'ny fampitomboana ny baiko avy any ivelany, ny famatsiana rojom-pandraharahana dia ao anatin'ny fanjakana tsy fahampiana mitohy.
Voakasiky ny toe-javatra nisy ny valanaretina, maro ny baiko nataon'ny mpanamboatra any ampitan-dranomasina momba ny fitaovam-pisorohana ny valanaretina vao haingana. Ireo mpanamboatra eo amin'ny sehatry ny fandrefesana ny mari-pana sy ny fitaovana fitsaboana dia samy nilaza fa nahazo baiko maro hafa any ivelany izy ireo tato ho ato, anisan'izany ny fitaovana fandrefesana mari-pana, ny fanadiovana ary ny monitor, izay avy any Azia atsimo atsinanana, Moyen Orient ary Eropa. Noho ny fiakarana tampoka amin'ny fangatahana any ivelany, ny fitaovam-pitsaboana mifandraika amin'ny fikarohana sy fitsaboana COVID-19 dia mitohy malaza, toy ny basy mari-pana, thermomera infrared, fitaovana fakana sary CT ary fitaovana fitsaboana hafa dia tsy ampy. Ny fangatahana mahery eo amin'ny tsenan'ny fitsaboana dia mitaky ny fangatahana singa elektronika ambony mba hitombo be.
Araka ny thermometer infrared somary mafana ankehitriny, ny singa sy ny singa ao anatiny dia ahitana indrindra: sensor infrared marie, MCU, fahatsiarovana, fitaovana LDO, mpiaro fitantanana herinaratra, diode. Ny sensor infrared hafahafa no singa fototra amin'ny fitaovana fandrefesana mari-pana. Anisan'izany, ny famatsiana sy ny fangatahan'ny sensor, ny fitehirizana, ny MCU, ny mari-pamantarana signal ary ny puce power supply dia somary tery ihany. Ny angon-drakitra dia mampiseho fa ny fangatahan'ny sensor infrared thermopile dia miharihary, mitaky ny 28%, arahin'ndrindra ny processeur sy ny puce power, miisa 19% sy 15%, ary ny PCB sy ny chip de mémoire dia 12%. Ny singa pasif dia 8,7%.
Noho ny fiparitahan'ny valan'aretina eran'izao tontolo izao dia firenena maro no ao anatin'ny toe-javatra maika. Miaraka amin'ny fitomboan'ny fangatahana fitaovana fisorohana ny valanaretina ao an-trano sy any ivelany, amin'ny maha mpanamboatra sensor sy modules IR thermopile azy, andraikitra lehibe tsy maintsy hananana amin'ny sehatry ny famaritana ny fitaovana fandrefesana mari-pana, Sunshine Technologies dia namaly haingana ny fangatahana. Mandritra ny fiantohana tanteraka ny fangatahan'ny mpanjifa, dia nohamafisinay koa ny fanavaozana ny fikarohana sy ny fampandrosoana, mba hanomezana singa fototra azo antoka ho an'ny fitaovana fandrefesana mari-pana tsy mifandraika amin'ny fisorohana sy ny fifehezana ny valanaretina.